I Clickfunnels Umugqa Ikhuphoni - Uphondo Of The Day
Clickfunnels futhi Umugqa kuthiwa izinkampani abalingani ngemihahiso khulula ukumema abasebenzisi ukujoyina lwamakheli noma ukuthengisa uhlu.
Indlela basebenzela pretty elula.
Ukuze usethe i- clickfunnels umugqa isigqebhezana uzodinga ukudala isikhokhelo plan yesikhulumi Umugqa kanye umkhiqizo khulula ukuthi ihambisana nemigomo yabo.
Bobabili izinkampani ziye zasungula uchungechunge izilungiselelo umsebenzisi uhlanganyela umkhiqizo wakho izolandela ukuba nakanjani luphenduke ukuguqulwa.
Umugqa kuyokusiza ukuba ubhekane lokho ukhokhiswe ikhasimende kanye nohlobo lwemali kanye nezikhathi ukuqoqa izingcaphuno kusevisi noma okuhle.
Clickfunnels kuzosiza ukulandela oda kanye malini imali wena empeleni okwenza zonke ikhasimende kanye izinkokhelo kwenziwa ngamunye wabo.
Filed Under: Clickfunnels Tagged With: clickfunnels umugqa isigqebhezana